MediaLight Mk2 Eclipse 1m 6500K CRI 98 Bias Mwenje - MediaLight Bias Lighting
musha MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter (Yekuratidzira Komputa)
MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter (Yekuratidzira Komputa)
Mutengo wepakutanga $35.95
Mutengo wepakutanga $35.95 - Mutengo wepakutanga $45.90
Mutengo wanhasi $32.95
product.variants.choose_variant Kwete (iyo Eclipse yatouya neisina kure kure dimmer) - $ 32.95 Ehe, wedzera infrared remote control uye dimmer (+ $ 8.95) - $ 41.90 Ehe, wedzera MagicHome WIFI dimmer yeIOS uye Android zvishandiso, inowirirana ne Alexa neGoogle Imba (+ $ 9.95) - $ 42.90
Kwete (iyo Eclipse yatouya neisina kure kure dimmer) Ehe, wedzera infrared remote control uye dimmer (+ $ 8.95) Ehe, wedzera MagicHome WIFI dimmer yeIOS uye Android zvishandiso, inowirirana ne Alexa neGoogle Imba (+ $ 9.95) Wedzera remote control?
Yakanakisa Kuvhenekera Kwemavara-Akakomba Vhidhiyo
Kuona Mamiriro ezvinhu
Hazvisi zvekungowana kupfurwa kwakakwana; zviri zvakare nezve kuve nechokwadi chekuti izvo zvaunoona pane skrini ndizvo chaizvo zvinozoonekwa nevamwe kana vachiona basa rako. Ndosaka takagadzira zvigadzirwa zvedu zvine huchokwadi mupfungwa - saka unogona kuva nechivimbo chekuti zvese zvese zvepurojekiti yako zvinomiririrwa nemazvo pane chero chinhu chekuona.
The Mk2 Eclipse 1m inosanganisa Ultra-yakakwira CRI uye tembiricha tembiricha kunyatso neyakareruka uye kutakurika yeUSB-inofambiswa neUSA tsvete magetsi system. Ruvara-rwakagadzika kudzikira uye nekukurumidza kudziya unoona kuti yako yakatenderedza mwenje inogara iri pachinangwa.
Zvese zvigadzirwa zveMediaLight Mk2 Series zvinogovera zvakaenzana kugoverwa kwesimba kwesimba reD65, kudzivisa maonero anoenderana uye kuona mwenje unowirirana. Raira MediaLight uye uone mutsauko wega.
MediaLight Mk2 Magadzirirwo:
Yakakwira-chaiyo 6500K CCT (Yakabatana Ruvara Kupisa)
Ruvara Rwekupa Index (CRI) ≥ 98 Ra (TLCI 99)
Spectro Chirevo (.PDF)
Ruvara-rwakagadzika kudzikira uye pakarepo kupisa
USB 3.0 Inowanikwa
Inosanganisira PWM dimmer (remote control inowanikwa pane imwezve mari)
Peel uye unamate chaiyo 3M inonamira inonamira
Yakakurudzirwa kune ese maratidziro, kusanganisira High Dynamic Range (HDR)
4.8 Kubva pane 73 Ongororo
Ndiri kushamisika kuti kuvheneka uku kunoita kuti kugara pakombuta yangu kuve nyore pameso, mavara anotaridzika zviri nani. Zvechokwadi zvakakodzera. Uyewo kukurumidza zvikuru kutumira
Kwete (iyo Eclipse yatouya neisina kure kure dimmer)
Zvinopfuura gadget chete
Mhoroi, ndakagutsikana kwazvo nechigadzirwa ichi chinopa mwenje wakachinjirwa kunyaradzo yekuona. Inogara yakabatidzwa. Ndinonyanya kuikoshesa usiku kana pamazuva akaipa emamiriro ekunze (zvakaita sechidimbu chezuva mumba). Ndakatenga hurefu hwe1m ye34 "screen, ini zvechokwadi ndaifanira kunge ndakasarudza 2m (tevera gwara).
Ehe, wedzera infrared remote control uye dimmer (+ $ 8.95)
Akanga anobatsira ichi? 0 2
Ndakadudzira izvi kubva kuPolish kune vatengi vedu, uye ndaikupindura iwe pachako, asi iwe wakasiya email yenhema, uye hausi mutengi akavimbiswa: "Zvese Chinese LED tepi. PaAliexpres unogona kutenga zvakafanana kune mashoma pennies. Kubva kukambani, ini ndingatarisira chigadzirwa chehunyanzvi chinogona kuvheneka chitarisiko chisina kunamatira ichi chipenga uye kuisa chese chekutarisa neglue (rombo rakanaka mukutyora izvi gare gare uye kuchenesa cheki). Kwete, iyi haisi "yakajairika Chinese LED tepi" uye kana iwe uchifunga kuti ese maLED akafanana, unenge wakanganisa. Muchokwadi, kana iwe ukaodha gumi akasiyana generic LED mitsetse yaisatomboenderana, rega kufananidza iyo CIE yakajairwa inovhenekera D10. Iyo glue haina generic zvakare. Iyo 65M VHB, yakagadzirwa kuti igare hupenyu hwemwenje, kusiyana nemamwe ma LED mitsetse anooma uye anodonha pasi pehuremu hwawo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kukuvadzwa kwemutsetse panguva yekubviswa kwakavharwa pasi peMediaLight waranti. Tichatsiva jira rako nemodhi yawakatenga. VHB inogona kubviswa zvakachena, asi inofanira kupepetwa zvishoma nezvishoma. Kana paine zvakasara, ungangoda kushandisa rag rakanyorova rine sipo yakajairika. Mamwe marau akanga asina kusimba zvakakwana. Izvi tinozviziva kubva pane zvakaitika. Uye kana iwe usingade "kunamira iyi ****" kune yako monitor, kumbira roll ye gaffer tepi. Izvo ndezvemahara nechero bias mwenje odha kubva kune yedu saiti. Tinokutendai nekugovera maonero enyu asingazivikanwe. Sekuda kwatinoda kufadza munhu wese nguva dzese, tinonzwisisa kuti hazvigoneke uye tine mutemo wakasununguka wekudzoka.
Yakanaka kwazvo bias mwenje yemavara giredhi suite
Chiedza Chikuru Kune Yangu iMac
Chiedza chinonyatso batsira kuona mavara zviri nani kana uchigadzirisa ruvara pamifananidzo. Ini handisati ndashanda pane chero mavhidhiyo parizvino, asi zvakafanana zvinofanirwa kushanda. Iwe zvechokwadi haudi kupisa kwemavara kwekamuri kunokanganisa izvo maziso ako ari machena uye zvino zvinotaridzika zvakasiyana panguva dzakasiyana dzezuva. Iyo yekuwedzera-on roll yegaffer tepi yaive rubatsiro rwakakura zvakare. Ini handina basa nekubatanidza zvachose MediaLight yandakawedzera paTV yangu, asi ini ndinoda kuchengetedza kukosha kwekutengesa kumusoro paMac yangu kuti kana yave nguva yekusimudzira. Iyo gaffer tepi inofanira kubva nyore pasina chasara.